Wafdi ka socda IGAD oo markale la kulmay odayaasha Hiiraan iyo arrin weli la isku mari la’yahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi ka socda IGAD oo markale la kulmay odayaasha Hiiraan iyo arrin weli la isku mari la’yahay
Waxaa maanta magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaaray wafdi ka socday urur goboleedka IGAD oo uu hogaaminayo wakiilka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afeey.
Wafdigaan ayaa sida la sheegay kulan albaabada u xiran la yeeshay odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan oo uu horkacaayo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Ilaa iyo haatan lama ogo waxa kulankaasi looga hadlay, waxaana sida aynu ka helnay ilo-xog-ogaal ah ay sheegayaan in looga hadlay arrimo la xariira shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Wafdiga IGAD ee kulanka kadib ka dhoofay magaalada B/weyne, mana jirto wax faah-faahin ah dheeraad ah oo laga helaayo waxa uu kulanka kusoo dhamaaday.
Dhawaan ayay ahayd markii wafdi ka socdo IGAD uu kulan sidaan oo kale ah la yeeshay odayaasha gobolka Hiiraan, waxaana kulankaasi kadib muddo 5 maalmood ah loo qabtay odayaasha.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah odayaashaas Hiiraan ayaa waxay diidan yihiin in shirka lagu qabto magaalada Jowhar, waxayna dhawaan magaalada B/weyne ka sheegeen in aysan gabi ahaanba dooneyn in xilligaan ay wax la qeybsadaan gobolka Sh/dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, urur goboleedka IGAD ayaa dadaal xoogan ugu jiro sidii ay odayaashaan ugu qancin lahaayeen inay ka qeybgalaan shirka Jowhar, inkastoo badi waxgaradka Hiiraan ay shirka Jowhar aqbaleen hadane weli waxgaradka qaar ayaa diidan ka qeybgalka shirkaasi.